Chinram SAC Chairman Pu Ngun San Aung Innhmai telh in Hmun4ah BombaPuak – Hakha Cherry
Chinram SAC Chairman Pu Ngun San Aung Innhmai telh in Hmun4ah BombaPuak
Nihin zinglei sml. 4:00 hnu ah Hakha khua i Chinram SAC Chairman Pu Ngun San Aung innhmai telh in Hakha khuachung hmun4ah bombapuak, tiah thawng kan theih.
Burmese ချင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ နေအိမ်ရှေ့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း ၄:၀၀ နာရီ၀န်းကျင်တွင် ဟားခါးမြို့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲသံ ၄ ချက်ကြားရပြီး ပြည်တော်သာရပ်ကွက်နေ ချင်းပြည်နယ် စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ ဦးငွန်ဆန်အောင် အိမ်ရှေ့တွင် ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဦးငွန်ဆန်အောင်အိမ်‌ရှေ့တွင် ပထမအကြီမ် တစ်ချက် ပေါက်ကွဲပြီး ချင်းဦးစီးရပ်ကွက် စုပေါင်းရုံး‌ေရှ့၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ရှေ့နှင့် မြို့သစ်တွင်နေထိုင်သော စစ်ကောင်စီသတင်းပေးဆိုသူ အိမ်ရှေ့တို့တွင် ပေါက်ကွဲမှု ၃ ခု ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာရပ်ကွက်များတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များရောက်ရှိလာပြီး ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ရှိမရှိမသိရှိရသေး‌ပေ။The Chin Journal April 28, Hakha
Tedim ah Ralkap nih Tlangval No Felix Thang Muan Lian an Kah